समाज – TrishuliKhabar
काठमाडौं, माघ ८ । सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत तातोपानीको दश किलोस्थित लार्चामा निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाहको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा चिनियाँ रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी…
काठमाडौं, ७ माघ । ३३ किलो सुन काण्डका कारण बिराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। न्यायापरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भुर्तेललाई छानबिनका लागि हाजिर गराउने…
काठमाडौं, माघ ७ । बजारमा चलेको चर्चा अन्तत पुष्टी गर्दै चर्चित सन्चारकर्मी रवि लामिछाने र चलचित्र विकाश बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। रवि र निकिताले सोमबार काठमाडौँ…
काठमाडौं, माघ ७ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कारागारका रुपमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा १३ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । कारागारभित्रको चिसो र विभिन्न रोगका कारण चालू आर्थिक वर्षमा १३ कैदीबन्दीको मृत्यु…
काठमाडौं, माघ ७ । पौष शुक्लपूर्णिमाका दिनदेखि शुरू हुने श्री स्वस्थानी व्रतकथा तथा माधवनारायणको पूजा आराधना आजदेखि सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष आजैका दिन (पुस शुक्ल पूर्णिमा) देखि स्वस्थानी…
६६ हजारले भरे कर्मचारी समायोजन फारम
काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले कर्मचारी समायोजन फागुन ३ भित्रै सक्ने गृहकार्य थालेको छ । समायोजन फारम भरेका कर्मचारीको विवरण जाँच सुरु भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको…
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द
काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार ठेक्का रद्द गरेको पत्र जारी गर्दै सरकारले ठेक्का तोडेको घोषणा गरेको हो । अब १४…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइमानी गरेः डा. केसी
काठमाडौं, ६ माघ । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षबाट…
काठमाडौं, माघ ६ । प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूणिर्मादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म मनाइने घरघरमा श्रीस्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि शुरु हुँदैछ । स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसी कथा भन्ने र सुनाउने गरे मनोकांक्षा…
अनुहार नचिनिने अवस्थामा युवकको शव फेला
काठमाडौं, माघ ६ । ओखलढुंगाको चम्पादेबी गाउँपालिका १० रानीवनमा एक किशोरको शव फेला परेको छ । लिखु गाउँपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिकाको सिमाना साविकको रानीवन ३ घ्याङ्ले खोलामा अन्दाजी १६–१७ वर्षका…